vice - Synonyms of vice | Antonyms of vice | Definition of vice | Example of vice | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for vice
Top 30 analogous words or synonyms for vice
Punk jazz ဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်။ Melbourne ဩစတေးလျမှ Erata တီးဝိုင်းသည် ပေါ်ပေါက်လာသောအမျိုးအစားမှ ခေတ်ပေါ်အစိတ်အပိုင်းများကို ကိုးကားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀တွင် Music Vice မဂ္ဂဇင်းမှ အင်တာဗျူးဖော်ပြချက်များ ပါရှိသည်။
Baggy အဖြစ်အပျက်သည် မက်ချက်စတာ ဂီတ၏ ကြီးမားသည့် လွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရသည်။ Madchester တီးဝိုင်းအများစုသည် baggy နှင့် vice versa ဟုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Baggy သည် psychedelia နှင့် acid house လွှမ်းမိုးခဲ့သည် ဂီတပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး မကြာခဏာ funky drummer beat များလည်းပါဝင်သည်။ The mock Turties နှင့် The Soup Dragons ကဲ့သို့ တီးဝိုင်းများသည် သူတို့၏အသံများကို တီထွင်ဆန်းသစ်လာကြသည်။ သီချင်းရေးသည့် ပုံစံများ ကူးယူလာကြသည်ဟု ရေးပန်းစားနေသော baggy တီးဝိုင်းများကို စွပ်စွဲလာကြသည်။ indie နှင့် vice versa ကြားထဲမှ ကူးယူလာကြသည်ဟု ဆိုသည်။ Pop ဂီတထဲမှ indie dance ခေတ်မှ တီးဝိုင်းများကို အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲနိုင်သည်။ တစ်မျိုးမှာ baggy နှင့် နောက်တစ်ခု indie dance ဖြစ်သည်။ The Shamen သည် psychedelic indie rock တီးဝိုင်းဖြစ်
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဝင်းဒိုးစ် Microsoft Windows (သို့မဟုတ် Windows) ဆိုသည်မှာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကော်ပိုရေးရှင်း မှထုတ်လုပ်သော ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကော်ပိုရေးရှင်းမှ Windows ဆိုသောအမည်ဖြင့် ယခင် MS-DOS တွင် Graphical User Interfaces (GUIs) များအပေါ် စိတ်ဝင်စား မှုကြီးထွား လာသည် နှင့်အမျှထပ်မံအဆင့်မြှင့်ကာ ၁၉၈၅ နိုဝင်ဘာလတွင်စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Microsoft Windows သည် ကမ္ဘာ့ တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပျူတာများ၏ ဈေးကွက်တွင် အချိန်တိုတိုဖြင့် ကြီးထွားစိုးမိုးလာနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် IDC conference မှာ IDC မှ Vice President ဖြစ်သူ Avneesh Saxena က Windows သည် လက်ရှိ Client Operatingsystem ဈေးကွက်မှာ ၉၀% ခန့်နေရာယူထားပြီလို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိ နောက်ဆုံး Windows ၏ client version အဖြစ် Windows 10 နေရာယူထားပြီး၊ Server version အဖြစ် Windows Server 2012 ကိုအသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
ဂျင်မီဝေးလ်စ် In 2004, Wales and then-fellow member of the WMF Board of Trustees Angela Beesley founded the for-profit company Wikia, Inc. Wikia isawiki farm—a collection of individual wikis on different subjects, all hosted on the same website. Its most popular wikis include Memory Alpha (devoted to "Star Trek"), WoWWiki ("World of Warcraft") and Wookieepedia ("Star Wars"). Another service offered by Wikia is an open source web search engine named Wikia Search, intended to challenge Google and introduce transparency and public dialogue about how it's created into the search engine's operations. Wales stepped down as Wikia CEO to be replaced by angel investor Gil Penchina,aformer vice president and general manager at eBay, on June 5, 2006.
မီယာအာကာသစခန်း In September 1993, U.S. Vice President [[Al Gore, Jr.]], and Russian Prime Minister [[Viktor Chernomyrdin]] announced plans foranew space station, which eventually became the [[International Space Station]]. They also agreed, in preparation of this new project, that the United States would be heavily involved in the "Mir" programme as part of an international project known as the [[Shuttle–Mir Program|Shuttle–"Mir" programme]]. The project, sometimes called "Phase One", was intended to allow the United States to learn from Russian experience in long-duration spaceflight and to fosteraspirit of cooperation between the two nations and their [[List of space agencies|space agencies]], the U.S. [[National Aeronautics and Space Administration]] (NASA) and the [[Russian Federal Space Agency]] (Roskosmos). The project helped to prepare the way for further cooperative space ventures, specifically, "Phase Two" of the joint project, the construction of the [[International Space Station]] (ISS). The programme was announced in 1993; the first mission started in 1994, and the project continued until its scheduled completion in 1998. Eleven Space Shuttle missions,ajoint Soyuz flight, and almost 1000 cumulative days in space for U.S. astronauts occurred over the course of seven long-duration expeditions.